नेपाल भर्सेस ओमानः दिपेन्द्र पनि अाउट, क्रीजमा सोमपाल र आरिफ ! [LIVE] – Everest Dainik – News from Nepal
नेपाल भर्सेस ओमानः दिपेन्द्र पनि अाउट, क्रीजमा सोमपाल र आरिफ ! [LIVE]
काठमाडौं, भदौ १३ । मलेसियामा जारी एशिया कपका लागि छनोट प्रतियोगितामा अहिले नेपाल र ओमान भिडिरहेका छन् । आज नेपालको प्रदर्शन खराब रहेको छ । यो समाचार तयार पार्दासम्म नेपालले महत्वपूर्ण ४ विकेट गुमाएको छ । २२ ओभरको खेल सकिदा नेपालले ८० रन बनाएको छ ।
कप्तान पारस खड्का, दिपेन्द्रसिंह ऐरी र सुवास खकुरेलको प्रदर्शन आज खराब रह्यो । सुवास ४ रनमा आउट हुँदा पारस ८ रन बनाएर पवेलियन फर्किए भने, दिपेन्द्र ९ रनमा अाउट भए । सुवास रन आउट भएका हुन्, भने पारस एल्बीडब्लूको सिकार । यस्तै दिपेन्द्र क्याच अाउट भए । उपकप्तान ज्ञानेन्द्र मल्ल ४५ रनमा पवेलियन फर्किए । क्रीजमा सोमपाल र आरिफ छन् ।
ट्याग्स: Asain cup, Dipendra Air, nepal vs oman, nepali cricket team